Talaado, Agoosto 21, 2012 Talaado, Agoosto 21, 2012 Eva McKnight
Aniga oo ah oday sare oo kulleejo ah, waxaan dib u milicsaday usbuucii udambeeyay jaamicada fasalka koowaad anigoo wata shahaadad ceeb ah, waana hubaa inaanan keli aheyn Waxay u badan tahay aragti cilmiyaysan oo la caddeeyay in markii kumanaan 18 jir ah lagu riixo xaalad bulsheed oo xun, dareenka aadanaha ayaa bilaabmaya qof walbana wuxuu noqdaa mid aad ugu riyaaqsan wax walba. Intii lagu gudajiray jihada fasalka koowaad, waxaad u badan tahay inaad saaxiibo fiican la ahayd qof kasta oo aad la kulantay, iyo ninkaas aad la kulantay maalintii ugu horreysay? Runtii ma wuxuu ahaa "Kan"? Fadlan ii sheeg inaan kaligey aheyn halkaan. Nasiib darrose, xiisahaas xannuunsiga badanaa wuxuu ku daadanayaa xisaabaadka warbaahinta bulshada ee kulleejada koowaad sidoo kale. Kahor intaadan kahadlin qaar ka mid ah warbaahinta bulshada oo aad uxun ayaa kaqeyb galaya kulleejada kowaad ee ay gasho, fadlan ogow inaan kahadlayo khibradeyda shaqsiyadeed dhowr kamid ah. Waa tan waxa aad sameyn karto si aad isaga ilaaliso inuu noqdo qofka ugu dhibsashada badan internetka muddo toddobaad ah:
Iska yaree kaftanka gudaha. In kasta oo #Ginasredshoe uu astaan ​​u noqon karo wax qosol badan oo kugu dhacay adiga iyo hanuunintaada bilowga hore asxaabtaada, wax fikrad ah kama haysto waxa ay taasi la micno tahay. Way fiicantahay in marmar tixraac kaftan ah gudaha warbaahinta bulshada, xitaa waxaa ka sii fiican in laga raali galiyo qof kasta oo kale oo noocaas ah oo kugu neceb. Si kastaba ha noqotee, haddii aad wadahadalka Twitter ka kooban tahay in ka badan 15 Tweets inta u dhexeysa
saaxiibbadaa oo isticmaalaya hashtag “Ginasredshoe” - qofkaaga cusub ayaa hubaal muujinaya.
Ha ku abuurin album leh 16,047 sawirada webcam. Oh, waxaad ku iibsatay laptop cusub kamarad webka? Fadlan ha i xasuusin adoo ku dhex qulqulaya warkayga wararka albumyo la yiraahdo “My webcam taken”. In kasta oo mararka qaarkood ay tahay wax lagu farxo in la daabaco dhawr sawir oo sawirada saaxiibbada ah asxaabtaada, haddana uma baahni inaan ku arko wax isku mid ah sepia iyo qaabka farshaxanka. Marka laga reebo dadka kale ee ku jira albamkaaga, cidina run ahaantii ma danaynayso sida weyn ee aad uga dhigi karto ishaada isha hal muuqaal ah.
Ha isla meel dhigin dhammaan xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada. Haddii jadwalkaaga Facebook ay ku jiraan sawirro aad adigu Instagrammed iyo Tweets ku xireyso sawirrada Instagrammed la dhaho, waad khaldameysaa. Isku-wada-darka dhammaan xisaabaadkaaga warbaahinta bulshada ayaa ka careysiin doonta dadka kugu raacaya warbaahinta badan. Haddii aad dareento baahi loo qabo inaad wax ku wadaagto warbaahin kale oo warbaahinta bulshada ah, iskuday inaad ku haysato goob kale.
Ha ku boodin boodhadhka warbaahinta bulshada haddii aadan mowduuca aqoon. Musharax madaxweyne ama qof caan ah ma kahadlay jaamacadaada kahor sanadkaaga cusub? Haddaadan halkaas joogin, ha isku dayin inaad iska dhigtid. Ka fogow sheekooyinka warbaahinta bulshada ee aan adiga adiga quseyn. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay musiibooyinka laga yaabo inay hore uga dhici jireen xeradaada. Bixinta faallooyin ku saabsan kuwan waxay kugu ridi doontaa khatar aad u weyn oo ah inaad xumeyso ardaydii ku sugnaa xerada dhacdada.
Fadlan, FADLAN, ka ilaali sawirada xafladahaas waqtigaaga. Sawiradan daruuri maahan inay ku jiraan khamriga - sawir kasta oo aad sameysid oo ay ku jiraan calaamadda nabadda, wejiga duck ama carabka oo aad ku dhejisid ayaa hubaal noqon doona
ceeb iyo xirfad la’aan muddo saddex sano ah. Sawiradaasi waa sababta ay dadku u diidaan inay qaataan waqtiga Facebook. Intaas waxaa sii dheer, sawirrada noocan oo kale ah waxay hubaal ka dhigayaan inuu faallo ka bixiyo mid ka mid ah waalidiintaada oo leh Facebook - oo waxay oran doontaa "Kuwaasu waxay ahaayeen maalmihii!" ama “Aan ka hadalno tan markii aad timaaddo guriga xilliga nasashada.”
Kaalay - Waan ogahay inaad rabto inaad dib u xasuusato kuleejka hadda. Laga bilaabo Agoosto 20 ilaa Sept. 21, waxaan halkaan ku siineynaa ardaydeena kulleejada gudahaQalabaynta . Waxaan soo dhejin doonnaa talooyin caawimaad u leh kulliyadda (iyo nolosha). Oh, sidoo kale waxaan siineynaa ardayda jaamacadda Qorshaheena Bilawga ah ee bilaashka ah. BaadhidQalabaynta Ku noqoshada dugsiga bogga ololaha Wixii macluumaad dheeraad ah.
Tags: Content SuuqFaux pasMedia Social Suuq
Eva McKnight waa layliyaha xiriirka dadweynaha ee Formstack. Waxay sare ka tahay Jaamacadda Anderson, waxay baraneysaa farshaxanka isgaarsiinta iyadoo diirada la saarayo xiriirka dadweynaha. Markii Eva aysan u shaqeyneynin Foomka Farsamada ama Isgaarsiinta Fifth Street, shirkadda shaqaalaha ee ardayda ee ka tirsan AU, waxaad ka heli kartaa iyada oo saaxiibbadeed la baashaalaysa ama sawirro badan ka qaadanaysa bisadeeda. Malaha kan dambe.
waaw. ma aniga uunbaa mise waa midkan toosan ee qumman?
Nov 15, 2012 at 5: 51 AM
Akhrinta balooggan waxay lamid tahay Hooyaday oo ii sheegtay!
Febraayo 17, 2013 saacadu markay tahay 3: 17 AM
ma haysatid wax sawir ah oo ku saabsan facebook-gaaga oo carabkaaga ku dhejinaya, samaysanaya calaamadda nabadda, ama haddii kale xiiso u leh dhammaantood? waxaad u egtahay afargeesle. haddii shaqo-bixiye mustaqbal kuu eegi doono maxaa yeelay waxaad carabkaaga ku dhejineysaa sawir ku yaal facebook-gaaga gaarka ah, uma maleynayo inaad dooneysid inaad iyaga u shaqeyso